မိန်းမပွေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို စွမ်းအားတစ်ခုကပြစ်ဒဏ်ခတ်လိုက်တဲ့အခါ ရေကန်ထဲမတော်တဆပြုတ်ကျပြီးနောက်ရက်
မိန်းမဘ၀နဲ့ နိုးထလာခဲ့ပါတယ် ။ သူရောက်နေတဲ့ခေတ်က
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းထောင်ကျော်က ဘုရင့်ရဲ့ နန်းတက်မိဖုရားဖြစ်နေတာပါ ။
သူက ယောကျာင်္းစိတ်နဲ့ မိန်းမကိုယ်မို့ ဘုရင်ကိုစိတ်မ၀င်စားဘဲ
သူ့နားမလာအောင် မျိုးစုံကြိုးစားပါတော့တယ် ။
ဘုရင်ကလဲ သူ့အကိုတော်ရဲ့ ဇနီးနဲ့ ချစ်ကြိုက်နေတာပါ ။
အဲဒီ သပွတ်အူ ကြားထဲ မိဖုရားအဖြစ်နဲ့ရောက်သွားတဲ့ ကောင်လေးက
သူ့မူရင်းဘ၀ကို ပြန်ရောက်ဖို့ ဘယ်လိုတွေလုပ်မလဲ ?
ပြောင်းလဲသွားတဲ့ မိဖုရားရဲ့ အမူအကျင့်တွေ စိတ်ထားတွေက ဘုရင့်ကို စိတ်ပြန်လည်အောင်ဆွဲဆောင်နိုင်မလား ?
ဒီဇာတ်ကားလေးက ဟာသနဲ့ အချစ်ရောထားတဲ့ Fancy ကားလေးပါ ။
ဇာတ်အိမ်လေးက ထူးဆန်းပြီး အဆုံးထိဆွဲဆောင်သွားနိုင်ပါတယ် ။
မကြည့်ရသေးတဲ့သူတွေ ကြည့်ရှုဖို့ ညွှန်းပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။